I-Testosterone Sustanon 250 powder: Imfihlelo ye-18 kufuneka uyiqonde! | AASraw
I-Testosterone i-Sustanon 250 ipowder yokwakha umzimba: iimfihlo ze-18 kufuneka wazi !!!
/Blog/Testosterone Sustanon/I-Testosterone i-Sustanon 250 ipowder yokwakha umzimba: iimfihlo ze-18 kufuneka wazi !!!
ezaposwa ngomhla 12 / 19 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Testosterone Sustanon.
Testosterone Sustanon 250 powder ibhulogi yokuhamba
1.Testosterone Sustanon 250 powder summary 2.Yintoni i-Testosterone Sustanon 250?
3.Testosterone Sustanon 250 imbali 4.Yintoni i-Testosterone Sustanon 250 powder?
5.Njani iTesttosterone ephantsi? 6.Njani unyango lweTesttosterone?
7.I-Testosterone Sustanon i-250 powder isebenza njani kwi-Testosterone ephantsi? 8.Testosterone I-Sustanon 250 indlela yokwenza i powder
9.Unyani i-Testosterone Sustanon 250 powder? 10.kufuneka isetyenziswe njani i Testosterone Sustanon 250 powder?
11.Izithuba zeTestosterone Sustanon 250 12.Testosterone Sustanon 250 umjikelo
13.Testosterone Sustanon 250 ubomi bemizuzu 14.Ziziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela iTesttosterone Sustanon 250?
15.Ziziphi iimpembelelo ezingezantsi zeTestosterone Sustanon 250? 16.Ukwazisa ngeTesttosterone Sustanon 250
17.Yintoni umehluko phakathi kweT Testosterone Sustanon 250 Testosterone Enanthate? 18.Bufaka i Testosterone Sustanon 250 Powder Raw
Testosterone Sustanon 250 powder ividiyo
Testosterone Sustanon 250 powder esisiseko Abalinganiswa
igama: Testosterone Sustanon 250 powder
1.Testosterone Sustanon 250 powder summary
Testosterone Sustanon 250 powder, i-Testosterone Sustanon 250, yinto enobumba obumhlophe, ithandwa umxube we testosterone (umxube) kwaye akukho mbuzo udidi oludumile nolwaziwayo olwaziwayo. Abantu badla ukuthenga ubungcwele obuphezulu njenge-99% yobungqina be-Testosterone Sustanon 250 powder, esetyenziselwa abanxibe impahla, ukwandisa izinga le-Testosterone, ngaloo ndlela ukwandisa umzimba wakho, umyinge wokwakha umzimba ukusuka kwi-300-100mg, iimpembelelo eziqhelekileyo ze-Testosterone Sustanon 250 powder ziquka ukugcinwa kwamanzi kunye nokuvalwa, ukuphakama kwegazi (ngenxa yokugcinwa kwamanzi), kwandiswe ukugcinwa kwamatye okunokwenzeka / inzuzo, kunye ne-gynecomastia.
2.Yintoni i-Testosterone Sustanon 250?
I-Sustanon-250 yinkampani ye testosterone equkethe i-testosterones ezine ester ehlukeneyo: testosterone propionate (30 mg); testosterone phenylpropionate (60 mg); testosterone isocaproate (60 mg); kunye ne testosterone decanoate (100 mg). Lo uphuculo oluvela kwi-testosterones eziqhelekileyo ezifana ne-cypionate okanye i-enanthate, enika ixesha elifutshane lemisebenzi, Njengoko yonke imveliso ye-testosterone, uSustanon 250 unamandla kakhulu iziyobisi ze-anabolic kunye ne-androgenic. Eyona isetyenziswa ngokuqhelekileyo kumjikelezo wokubhukuda, ukubonelela ngeempawu ezinamandla kunye nobukhulu bomzimba. Uhlobo olutshanje lwe-Sustanon, olubizwa ngeSustanon 100, lwenziwa nakwiindawo ezithile.
Ukungaqondi kakuhle phakathi kwabasebenzisi abaninzi be-steroid kukuba i-Sustanon-250 ithwala amandla angaphezu kwamanye amafomu e-testosterone, oku akunjalo, nje kuphela i-testosterone, i-anabolic enamandla kunye ne-hormone ne-androgenic ngokwayo.
I-Sustanon-250 yaqale yaqulunqwa yi-Organon ngomgudu wokuhlanganisa i-testosterone epheleleyo ngenjongo yokwelapha i-hormone. Le ngcamango yayilula; Kwinqanaba elinye lenza i-testosterone eza kukhulula ngokukhululekile i-hormone ukusuka kwinqanaba lejoyiki ukuya kwiiveki ezimbalwa emva kokujova kwimizimba kunye nokulingana.
Ngokudala isilwanyana esinjalo isigulane se-HRT singakwazi ukugcina ngempumelelo i-testosterone ehamba emzimbeni wayo kwaye imele ilawulwe i-hormone kuphela emva kwee-3-4 iiveki ukufezekisa okokuphela. Ngexesha eli landela le protocol liza kubonakala lisebenza kakuhle, njengoko iqela liyimpumelelo kulo mbandela, ukugcinwa kwamanqanaba asegazini azinzileyo kwimeko ehlukileyo kwaye ngenxa yeso sizathu abo basebenzisa iSustanon 250 ngenjongo yokusebenza baya kufumana iijojo eziqhelekileyo ukuba ziyimfuneko .
3.Testosterone Sustanon 250 imbali
Ikampani elixuba imithi emva kokuphuhliswa kukaSustanon 250 yiNetherlands-esekelwe kwi-Organon International, eyafunyanwa yi-Schering-Plow Corporation ngoNovemba 2007. I anabolic steroid wenza ukungena kwayo kwimarike kwi-70s. Ingcamango yokuqala eyabangela abaenzi be-Sustanon 250 yayiza kuvela nomxube we testosterone oza kunika iingenelo ezinkulu ngaphezu kweyiphi na into enye ye testosterone kwimimandla yezonyango. Ukuzonwabisa kwakungomnye umqhubi wokuphuhliswa kweziyobisi ezinamandla njengoko ama-injections ambalwa ka-Sustanon 250 ayadingeka xa kuthelekiswa nezidakamizwa ze-testosterone ezifana ne-Testosterone Propionate kunye Testosterone Decanoate, ukubiza ezimbalwa.
Mhlawumbi, ukulungiswa kwe testosterone ngokugqithiseleyo ngabadlali nabadlali, uSustanon 250 akazange avunyelwe ukusetyenziswa okanye imvume yokuthengisa e-US. Nangona le nto iyaqhubeka isichenge esithandwa kakhulu kwilizwe lonke. Kodwa yintoni eyenza uSustanon 250 adume kangaka? Impendulo ayiyonto yayo, ephikisana nombono ogqithisileyo awukho ngaphezu kokulungelelaniswa kwamanye ama-testosterone. I-Esters ifakwe kwi-anabolic steroids kuphela inamandla okuba nefuthe ixesha labo lokukhupha kunye nehafu-bomi, kwaye abanalo nxamnye nokusebenza ngokuthe ngqo kumandla abo. Isizathu esiyinyani sokuphumelela kweSustanon 250 kunye nokuthandwa kwamanzi kukuba umsebenzisi umele ukufumana ubuninzi be-steroid ngexabiso elifanayo kunamanye amalungiselelo e-testosterone.
Nangona le steroid ene-anabolic iye yavuya kakhulu kwimpumelelo kunye nabadlali bomzimba, abazange babe ngabathengi abajoliswe kuyo abavakalisi be-Sustanon 250 besengqondweni xa bephuhlisa iziyobisi. Kunoko, babejolise ekunyuseni ukwandiswa kwezigulane ezidinga unyango ngokubonelela ngeshedyuli esilula. Izigulane ezilawulwayo i-Sustanon 250 akumele ihlale ixhala malunga nomthamo wabo, njengenye injini ye-steroid zonke iintsuku ze-21-28 zibonisa ukuba zanele ngokwezidingo zabo.
4.Yintoni i-Testosterone Sustanon 250 powder?
I-Testosterone i-Sustanon i-250 powder, impahla ye-Testosterone Sustanon 250, uhlobo lwe-White powder, umthengisi weemveliso ezininzi ze-steroids ngokuqhelekileyo uthengisa ubungqina obuphezulu kwi-Testosterone Sustanon 250 powder kwi-intanethi, yenza ukuba zonke iintlobo zetekisi zigqitywe u-Testosterone Sustanon 250, iinkcukacha ze-Testosterone Sustanon 250 ngezantsi:
Igama elithi Testosterone Sustanon 250
Kubonakala Bhala umpu
I-Assay ≧ 99%
Uninzi oMandla ≤10ppm
5.Njani iTesttosterone ephantsi?
I-testosterone ephantsi ibinzana elisetyenziswe oogqirha ukuchaza izinga elingaqhelekanga le-hormone testosterone. Xa kulinganiswa ngokufanelekileyo, i-testosterone ephantsi ithathwa njengengaphantsi kwe-300 ng / dl kwizigulane zesilisa, nangona abanye oogqirha bebonisa ukuba uluhlu oluqhelekileyo ngu-270 - 1070 ng / dl. Eminye imiqathango yezantsi-T ibandakanya i-hypogonadism (eziprayimari, ezisekondari kunye nezifundo eziphezulu, ngokuxhomekeke kwimbangela ye-T-low) kunye ne-testosterone (TD) .Testosterone yi-hormone eveliswa ngumzimba womntu. Ikhutshwa kakhulu kumadoda ngamathambo. I-Testosterone ithintela ukubonakala komntu kunye nophuhliso lwezesondo, Ivuselela umveliso wesilisa kunye ne-sex drive drive. Kwakhona kunceda ukwakha imisipha kunye namathambo. I-Testosterone ephantsi ingabangela uluhlu lweempawu.
Enye yezona nkxalabo ezijongene namadoda anamazinga aphantsi e-testosterone yithuba lokuba umnqweno wabo wesini kunye nokusebenza kuya kuthinteka, Njengabantu abaneminyaka yobudala, banokufumana ubuninzi beempawu ezinxulumene nomsebenzi wesondo onokubangelwa yimilinganiselo ehla ihomoni. Ezi ziquka:
unciphise umnqweno wesini
izikhetho ezimbalwa ezenzeka ngokukhawuleza, ezifana nokulala
Kwakhona uninzi lweenguqu zomzimba lunokwenzeka kumzimba wakho ukuba unamazinga aphantsi e-testosterone. I-Testosterone ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi-hormone "yindoda", Inceda ukwandisa ubunzima be-muscle, ikhokelela kwiinwele zomzimba, kwaye inomdla kwifomu yomntu jikelele. Ukuncipha kwi testosterone kunokukhokelela ekutshintsheni komzimba kuquka oku kulandelayo:
ukwanda kwamafutha omzimba
kunciphisa amandla / ubuninzi beemisipha
ukuncipha kweenwele zomzimba
ukuvuvukala / ukunyameka kwisisu sebele
iziphumo kwi-cholesterol metabolism
Ukongezelela ekubangeni utshintsho lomzimba, ukuba namazinga aphantsi e-testosterone angakuthintela kumgangatho weemvakalelo. Le meko ingakhokelela kwiimvakalelo zokudakumba okanye ukuxinezeleka. Inokuphinda ihlaziye umgangatho wakho wokuphila kakuhle. Abanye abantu banenkathazo ngememori kunye nokugxininisa kunye namava anciphisa amandla kunye nokuzithemba.
6.Njani unyango oluphantsi lwe Testosterone?
Unyango oluphantsi lwe-testosterone lwenzelwe ukwandisa amanqanaba e-testosterone. Uphando lubonisa ukuba ukwanda kwe testosterone kunokomeleza imisipha, ukukhusela amathambo kunye nokuphucula i-sex drive. I-testosterone yonyango yokutshintshwa kuphela inconywa kubayeni abanamazinga egazi abonisa i-testosterone ephantsi. Olu hlobo lonyango luya kuba nemiphumo eyahlukileyo ukusuka kumntu omnye ukuya kwelinye, kuba kunzima ukuqikelela iziphumo zonyango kumntu ngamnye.
Izindlela zeTestosterone Delivery
7.I-Testosterone Sustanon i-250 powder isebenza njani kwi-Testosterone ephantsi?
Njengoko isithako esikhulu seTestosterone Sustanon 250, i-Testosterone Sustanon 250 powder isebenza ngokukhuthaza ukuveliswa kwe testosterone, ukwandisa izinga le-Testosterone, ngoko uya kufumana inzuzo efanayo ne-testosterone efana no-Omnadren. Bonke abasebenzisi be-testosterone banokunyusa ngokugqithisileyo ubunzima besisipha, amandla kunye nesigxina. Ngaphezu koko, i-testosterone, eyona nto iphambili ekuncedeni ukugcina ubunzima besisu ngokubambisana ne-calorie yokunciphisa ukutya, yiyona hormone efanelekileyo kubadlali abajonge ukunciphisa amaninzi omzimba. Ngenxa yokuba i-testosterone inokuthintela i-hormone ye-hormone eyenza ukuxhatshazwa kwemisipha, i-Sustanon idala umzimba owanelisayo ngakumbi ngenxa yokwanda kwama-testosterone. Kukho, nangona kunjalo, ingozi ehambelana nokusebenzisa i-testosterone engaqhelekanga njengoSustanon. Xa ufuna ukusebenzisa iSustanon, kwaye xa usisebenzisa ixesha elide, amathuba okuba nemiphumo emibi iya kwanda. Imiphumo emibi iya kuhlala ixhalabele naluphi na uhlobo lwe-testosterone, kwaye yingakho sincoma i-inhibitor enhle xa usebenzisa i-testosterone. Kufuneka uqonde kwakhona iindlela ezisetyenziswayo zokusebenzisa i-testosterone ngokufanelekileyo ukuba ufuna imiphumo emihle.
8.Testosterone I-Sustanon 250 indlela yokwenza i powder
I-Sustanon 250 yenziwe ngeesters testersterone ezine, ngasinye sinomsebenzi wesikhathi sayo. Ngeendlela ezahlukeneyo ze-testosterone, i-Sustanon 250 yenzelwe ukunikezelwa ngokukhawuleza kwe-testosterone kwi-plasma yegazi, eyanceda ekunciphiseni ubude bemizi. I-testosterone ngokwayo, ngaphandle kwe-esters edibeneyo ine-half-life kwi-2-4 iiyure. Nangona kunjalo, xa i-esters zidibanisa nale hormone yemvelo incipha ukukhululwa kwe-testosterone. Ngomzekelo weSustanon 250, kunye ne-propionate ester eqhotyoshelwe kuyo, ukulungiselela ukulungiselela ukuhlolwa kwe-testosterone kunesigamu se-4. Iintsuku ze-5, ezide kakhulu kunexesha eliqhelekileyo lobomi be-testosterone. Iesters ezine zeSustanon 250 zithobela i-hydrolysis, oko kukuthi. ziphulwe ngenyathelo lwamanzi, phantse emva kokungena ngokubanzi ukushiya i-hormone ye-steroid yemvelo, i-testosterone, ekhululekile kwigazi.
Ulawulo lwee-Sustanon i-250 injections kubangela ukwanda okwenziwe kwi-testosterone, i -estestolol, i-dihydrotestosterone, kunye ne-androstenedione kwi-plasma yegazi. Kukho ukuphahla kwinqanaba le-SHBG (i-glom-binding hormone-globulin). I-FSH (iHolmone-stimulating hormone) kunye ne-LH (i-hormone yeLuteinising) ibuyiselwa kwindlela ekulindelekileyo emva kokulawulwa kweSustanon 250.
Kwamadoda aphethwe yi-hypogonadism - ukunciphisa umsebenzi osebenzayo wee-testes - unyango kunye nale mveliso ethandwa yi-Testosterone ukulungiselela ukuphuculwa okuphawulekayo kwiimpawu ze-testosterone. Kukho ezinye iintlobo zempilo ezinje ezifana nokunyuka komzimba kunye nokuxinwa kwamathambo. Ukuphucula umsebenzi wesondo yinto enye inzuzo yonyango - oku kubandakanya imisebenzi erectile kunye ne-libido.
Utyando lukhokelela ekunciphiseni i-triglycerides, kunye ne-serum HDL-C (i-High Density Lipoprotein-Cholesterol) kunye ne-LDL-C (i-Low Density Lipoprotein-Cholesterol), ngelixa ikhula i-hematocrit kunye ne-hemoglobin, kodwa i-PSA (Prostate Specific Antigen) ). Akukho miphumo yecala echazwe kwiimpawu zeprotate, kodwa unyango usebenzisa iSustanon 250 lunokwandisa ubungakanani beprotate yesigulane.
Xa ilawulwa kunye ne-androgens, izigulane ze-hypogonadal nazo zijongene nesifo sikashukela zibonisa ukuphucula u-insulin. Ukunciphisa izinga le-glucose kwigazi lezigulane kuye kwabikwa. Ukudibaniswa kweSustanon 250 kunye ne-androgens iye yabonakala ephumelelayo ekunciphiseni ubuqhetseba besilisa nabesilisa abangqingiliyo.
9.Yithini i-Testosterone Sustanon 250 powder? / Iinzuzo zeTesttosterone Sustanon 250 powder
Yintoni i-Testosterone Sustanon 250 powder?
Abadlali, abakhi bomzimba kunye nabani na abasebenzisa i-Sustanon banokuphumeza ithoni ye-muscle, amandla kunye nobukhulu abayifunayo. Amathuba abo okuva kunye nexesha lokugqibela liya kuba ngaphantsi kokusebenzisa enye imveliso ye testosterone, ngokunjalo. Kanye kuthathwe, i-Testosterone Sustanon i-250 powder iyaguqukela ngokuzenzekelayo ibe yindlela enamandla kakhulu ye-dihydrotestosterone, ejongene nomphumo wayo we-androgenic. Xa oko kwenzeka, umzimba uphumelele ukuvelisa amaprotheni kunaphambili, owenza ukukhula kwemisipha. Kwakhona ivumela ukuba izicubu ezincinci zamathambo zikhule ngakumbi, zinamandla kwaye zikhulu kunaphambili. Izibonelelo zeTestosterone Sustanon 250 powder ziquka:
Ukugcinwa kwe-nitrogen ekwandisiweyo
Iimpawu ezincibilikileyo zenziwe nge-16% nitrogen. Oku kulandela ukuba ngaphezulu kwesi sixhobo esiyigcinayo, i-atmospheric yethu ye-anabolic iya kuba. Le ngongoma apha kukuba xa abantu bethatha i-Sust, kwandisa ukugcinwa kwe-nitrogen. Oku kuncedo ekubhakeni nasekujikelezeni imijikelezo kwaye ke kutheni ama-weightlifters kunye nabakhi bomzimba bafuna Ukufuna ukwenza.
Iprotein yeprotheni yinkqubo eyenziwa yileliphi iiseli ezakha amaprotheni. Isibonda sakhiwo esiyinhloko samathambo esisiphako siyiprotheni. Enye inzuzo enkulu ye "Sust" kukuba iyakwandisa izinga leprotheni yangaphambili kwaye oku kwenza ukuba luncedo kumzimba kunye nabadlali.
Inani elibomvu leeseli legazi
Iiseli zegazi ezibomvu zithwala igazi elenziwe nge-oxygen kuwo wonke umzimba. Amanqanaba e-oksijini aphezulu egazini anceda abagijimi benza ngcono, Ukongeza, amazinga aphezulu e-oksijini egazini anceda abagijimi baphume ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, abantu abathengayo basebenzise i-Sust baya kuba nokusebenza okungcono, ukunyamezela nokubuyiselwa.
Inhibition yeHlucocorticoid Hormones
I-Glucocorticoid iHormone ikwabizwa ngokuba yi-hormone yokuxinwa kwaye ikhuthaza ukugcinwa kweoli kunye nokutshabalalisa izicubu zomzimba. Ukunquma ukulwa nala ma hormone ngokunciphisa ukulawula kwabo emzimbeni. Isiphumo sisesempilweni esingcono sempilo kunye neeseshoni zokufunda.
ukuthintela ukuguqulwa kwi-estrogen
Njengezinye izinto ezininzi ze-anabolic kunye ne-androgenic, i-Testosterone Sustanon 250 powder ingathonyelwa yinkomethini ye-aromatase, eya kuguqula i-testosterone kwi-estrogen. Xa uthatha i-Testosterone Sustanon 250 powder kwizilwanyana ezinoxanduva kunye nexesha elicetywayo, uya kufumanisa ukuba ukuguqulwa kwe-estrogen kulawulwa kakuhle, njengokuba kuchazwe ngasentla, kwezinye iimeko, abasebenzisi bangadinga ukudibana neSustanon nge-aromatase inhibitor njengo-Arimidex ukuvimba isenzo se-aromatase enzyme kunye nokukhusela ukuguqulwa kwi-estrogen.
Ezinye iintlawulo zeSustanon 250
Le steroid yinto enhle kubantu abahlekelwa yilahleko ye-libido, i-erectile disysction, ukunyaniseka, ukungazinzi kunye nokudandatheka. Ukuphucula kukuphucula ukucaca kwengqondo, kunceda ukuqinisa amandla omzimba omzimba kunye nokuphucula ingqondo yengqondo.
I-10.Yifanele isetyenziswe njani i-Testosterone Sustanon 250 powder?
I-Testosterone Sustanon i-250 powder yayidla ngo-Testosterone Sustanon 250 injection, i-Sustanon 250 mg Injection yi-hormone yesondo ngokwemvelo kwindoda nabasetyhini. Eli gama lisetyenziselwa ukunyanga izimo kubandakanya ukulibazisa ukutshatyalaliswa komntwana, ukungabi namandla, kunye nokungalingani kwamanye ama-hormonal.
11.Izithuba zeTestosterone Sustanon 250
Isilinganiselo sezonyango seTesttosterone Sustanon 250
Siye sazi ukuba iSustanon 250 yayilungiselelwe ekuqaleni kwaye ijoliswe ekusebenzisweni kwisicelo sezokwelapha, ngokukodwa ukonyango lwama-hypogonadal. Ukunyanga kwe-hypogonadism (okanye nayiphi na imeko eyenza ukungabikho kwe-Testosterone), isiluleko sokuqala sonyango Sustanon 250 sidluliselwe ukuphathwa kwe-250mg zonke iiveki ze-3. Umgaqo-nkqubo wokulawulwa ongapheliyo ngenxa yepropati echazwe ngaphambili yeSustanon 250 apho iya kubonelela ngeentlawulo zokukhululwa ezihlukeneyo kunye no-half-life ngenxa yokuxuba kweentlobo ezahlukeneyo zeesti Testosterone. Khumbula ukuba i-Sustanon 250 iya kubonelela ngokukhawuleza kwe-Testosterone ngexesha le-24-48 ngeyure (ngenxa yeendlela ezifutshane zeT Testosterone kwimxube, njengeTestonsterone Propionate kunye neTestosterone Phenylpropionate). Ukulandela ukukhululwa ngokukhawuleza, lonke iTesttosterone liza kuphakanyiswa ixesha elimalunga neentsuku ze-21.
Umqali, onomdla, kunye ne-Advanced Sustanon 250 Dosages
Ngeshwa kukho iimeko ezincinane zokuguquguquka kwee-Sustanon 250 izilinganiso phakathi kwamathathu amathathu wabasebenzisi (abaqalayo, abaphakathi, nabaphambili).
Isiqalo Sustanon 250 amanani aphakathi kwe-300 - 500mg ngeveki, eyona yimizuzu eqalayo yokuqala yee-testosterone kunye neloluhlu lwamanani kufuneka lwanele ngokwaneleyo ukubonelela ngenani elincinci kwinqanaba elincinane kunazo zonke.
Abasebenzisi abaphakathi baya kuqhuba inkqubela phambili kwi-500 - 750mg ngeveki yeSustanon 250. Abasebenzisi abathuthukileyo baya kwenza inkqubela phambili kakhulu kwi-dose range njengabasebenzisi abaphakathi, kwaye akufuneki ukuba bafumane isidingo sokunyuka ngaphezu kwesi sihlomelo (ngokukodwa becinga ukuba abasebenzisi abaphezulu bavame ukusebenzisa ezinye i-anabolic steroids ezixutywe ngeSustanon 250).
Kwimeko nayiphi na imeko, i-Sustanon 250 i-doses iqhubekile ihlala kwi-500-1000mg ngeveki, kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amayeza aphezulu nayiphi na i-anabolic steroid ayikho inkcazo yomsebenzisi ophambili. Amaxesha amaninzi, i-anabolic excessive steroid doses izakhokelela ekwenzeni ukwanda kweempembelelo kunye nokulimala komzimba. Amanani aphakamileyo kakhulu kwaye aninzi kakhulu asebenzisa kakubi kwaye ayisebenzisi kakuhle.
Ukuba ngumkhiqizo weTesttosterone, ukusetyenziswa kwe-Sustanon 250 njenge-primary anabolic kwisijikelezo akusoloko kuyimfuneko, kwaye oku kuye kwathinteka ngokukhawuleza kule phrofayili. Amaxesha amaninzi, abasebenzisi (abaninzi abasebenzisi abaphakathi kunye nabasemgangathweni) baya kubamba ezinye iimveliso kunye ne-Sustanon 250 (okanye nayiphi na into eyenziwa yiT Testosterone) kwaye banqwenela ukuba kuphela ezo zinye iicube zibonisa iziphumo eziphambili ze-anabolic kulo mjikelezo, Ngenxa yoko, ama-Sustanon 250 amanani kulo mzekelo zixhomekeke kwizinto ezibizwa ngokuba yi-TRT (iTytosterone Replacement Therapy). Iingcamango zokuqhuba i-Sustanon 250 okanye nayiphi na into eyenziwa yi-Testosterone kwi-TRT iqondo ukulinganisa nje izinga le-Testosterone elenza umzimba uphumelele ngokwemvelo, ukwenzela ukuba ugcine umsebenzi oqhelekileyo wemvelo okwenziwa yi Testosterone ngelixa ukuveliswa kwe-Testosterone yemvelo kuvaliwe umphumo we-anabolic steroid esebenzisa kulo mjikelo. Uluhlu olusamkelekileyo lweDTT ye-Sustanon 250 okanye nayiphi na into yeTesttosterone yi-100mg ngeveki.
Umfazi uSustanon 250 Isisombululo
I-Sustanon 250 ayikhuthazwa kubafazi ngenxa yobume obunamandla be-Testosterone. Kunoko, abagijimi besifazane abakhangela ukusebenzisa i-anabolic steroids kufuneka bajonge kwenye indawo kwi-androgenic anabolic steroids enamandla. I-Sustanon 250 isetyenziselwa imithi yabasetyhini ngenjongo yokuququzelela ukuguqulwa kwamabhinqa. I-Sustanon 250 yinkqutyana yokuzikhethela kule njongo ngenxa yobuchule bayo obunamandla bokuvelisa izilwanyana kunye nemiphumela emibi kubasetyhini. Ixesha elincinci kakhulu kwaye lihlukileyo lokukhululwa kwe-Sustanon 250 ayifanelekanga kubadlali beentombi abafuna ukusebenzisa i-anabolic steroids ngaphandle kwengozi enkulu yokuhlaselwa.
12.Testosterone Sustanon 250 umjikelo
I-Testosterone I-Sustanon 250 ingasetyenziselwa nayiphi na umjikelo ukuba i-bulking okanye ukusika kwaye njengokuba abasebenzisi abaninzi be-steroid baya kwakha imijikelezo yabo kwi-testosterone I-Sust ingaba yinto ekhethekileyo. Umjikelezo weTesttosterone uSustanon 250 unjenge:
Kuba umntu osebenzisa i-Sustanon-250 njengenxalenye yesicwangciso sokubuyisela i-testosterone i-250mg zonke iiveki ze-2-4 ngumlinganiselo oqhelekileyo kodwa oku kuya kuqulunqwa ngugqirha wakho .. Ukuphucula ukusebenza, njengombandela jikelele we-thumb 500mg ye testosterone bahlala becinga ukuba isiseko se-dosing level kwaye sigqibelele nawuphi na oqalayo. Ngelixa aba ngabaqali abaqalayo be-starters dose abaninzi baya kuyifumana yonke into abayifunayo kungakhathaliseki ukuba ihamba phambili kangakanani. Kuba i-hardcore, ixabiso le-1,000mg ngeveki yindawo eqhelekileyo kunye nangaphezulu kwimijikelezo yomzimba, ngakumbi abo bawela kwindawo yokukhuphisana. Qonda, xa kukhula umthamo, ngelixa imivuzo inokuthi iyenze ingozi.
Ungakwazi ukufumana lula umjikelezo weTesttosterone Sustanon 250 kwi-intanethi, kwaye ukhethe enye ehambisana nawe kakuhle .Abaninzi baya kufumana i-12-16 iiveki ze-Sustanon-250 ukuba zilungele kwaye zibekezeleke kakhulu kwiimeko ezininzi; Nangona kunjalo, isicwangciso socwangciso lwe-post cycle (PCT) siyimfuneko xa siphelile. Ngenxa yokuba i-Sustanon-250 ithatha ixesha elide uzakuqala ukuqala iiveki ze-PCT 3 emva kokulawula kwakho kokugqibela kwe-Sust okungabandakanya iHCG, iNolva kunye / okanye i-Clomid. Abo basebenzisa i-hCG bayacetyiswa ukuba baqale basebenzise malunga neentsuku ezilishumi phambi kwe-Nolva / Comid malunga neentsuku ezilishumi zokusetyenziswa.
13.Testosterone Sustanon 250 ubomi bemizuzu
Ukususela kumbono wokwakha umzimba, oku kunceda apho umakhi womzimba engazi indlela yokulayisha umthwalo we-steroid ngaphambili. Kodwa ukuba wenza, ukulayishwa phambili phambi kwe-ester engatshatanga kuza kufeza kakhulu into efanayo. Ngoko, uhlobo oluthile lwe-testosterone ester olufana ne-testosterone enanthate okanye i-testosterone cypionate inokusetyenziswa ngokukhawuleza kumjikelezo we-anabolic steroid endaweni kaSustanon.
Ama-esters amaninzi eSustanon kubangelwa i-pharmacokinetics encinci okanye utshintsho kwinqanaba leziyobisi ngexesha. Nge-ester enye, emva kweeyure ezininzi okanye ezininzi iintsuku zegazi ziyawela kwisiqingatha sento ebeyiyo; ngoko ngokuphindwe kabini lelo xesha eliwela kwisiqingatha kuphinda libe nekota enye yesigaba sangaphambili; ngoko ngokuphindwe kathathu kwinqanaba liwela kwelinye lesibhozo kwinto ebeyiyo, njl. Eli xesha libizwa ngokuba liqingatha lobomi.
Ubomi besiqingatha seSustanon 250, ayikho ixesha elinjalo elichanekileyo. Ulwazi olubanzi kwi-forum lubonisa ukuba emva kokuba amanqanaba okugqibela ejoza ehla kwisiqingatha sosuku lwe4; ukuya kwikota enye ngosuku lwe10; ukuya kweyesibhozo ngosuku lwe16; kunye neyeshumi elinesithandathu kwisithuba se-23. Okanye ukuba ukhetha ukusebenza kunye nenani elijikelezayo ngokwemaphesenti, njengoko amanqanaba amanani alinganiselayo kwi-40% ngosuku 6; 30% ngosuku 8; 20% ngosuku 11; kunye no-10% ngosuku 18.
14.Ziziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela iTesttosterone Sustanon 250?
Ukuba usebenzisa ezinye iziyobisi okanye ngaphezu kweemveliso zamanxeba ngexesha elinye, imiphumo ye-Sustanon 250 Injection ingatshintsha. Oku kunokunyusa umngcipheko wempembelelo okanye kungabangela ukuba iziyobisi zingasebenzi kakuhle. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amachiza, amavithamini, kunye nezongezelelo zokusebenzisa izityalo, ukuze ugqirha unokukunceda ukukhusela okanye ukulawula ukusebenzisana kwezidakamizwa. I-Sustanon 250 Injection inokusebenzisana namachiza kunye nemveliso elandelayo:
15.Ziziphi iimpembelelo ezingezantsi zeTestosterone Sustanon 250?
Yonke imithi, i-steroidal kunye ne-non-steroidal ngokufanayo ihamba kunye nefuthe elibi lemibi, uTestosterone Sustanon 250 akenzi nto. Iimpembelelo ezingasetyenziswayo zeTestosterone Sustanon 250 zifana nazo zonke iifom ze testosterone njengoko i-hormone esebenzayo ye testosterone yinto equka uSustanon-250. Njengoko i-testosterone, kungakhathaliseki ukuba ifomu eguqulwa kwi-estrogen nge-aromatase inkqubo ye-anabolic echaphazelekayo yempembelelo ye-estrogenic ingenzeka njenge-Gynecomastia, ukwanda kwengcinezelo yegazi, kunye neengxaki ze-cholesterol kunye ne-atrophy ye-testicular.
Nangona i-atrophy ye-testicular iyenzeka kubo bonke abasebenzisa i-testosterone iya kugqithiselwa xa isetyenzisiwe xa isetyenziswa ngokufanelekileyo. I-atrophy ye-Testicular iyenzeka kuba ngokulawula i-testosterone yethu engapheliyo kufuneka ivelise ngokwayo; njengoko i-testosterone ikhiqizwa kumathambo, xa umveliso uphazamisa nje ukuyeka; xa imveliso iqala kwakhona ibuyela kubukhulu bayo obuqhelekileyo. Ngaphandle kwe-atrophy ye-testicular, eya kuyenzeka ngokuqinisekileyo, ezinye iimpembelelo eziqhelekileyo ziyazikhusela kalula .. Njengoko ezininzi iziphumo zecala ngenxa yokuguqulwa kwe-estrogen ngokuthatha i-aromatase inhibitor ngokubambisana ne-testosterone yethu sinokuthintela i-estrogen ukuba ibophe kunye nokunciphisa isixa emzimbeni. Ngokugqithiseleyo kwaye kubaluleke kakhulu, ngokutya okufanelekileyo okucebileyo kumafutha enempilo sinokukhusela ngokubanzi ukuxinzelelo lwegazi kunye nemiba ye-cholesterol.
16.Ukwazisa ngeTesttosterone Sustanon 250
I-Sustanon 250 ayiyi kuzisa nayiphi na impembelelo embi xa isetyenziswe kwiinjongo zokwelapha ezifana ne-TRT. Nangona kunjalo, ukusebenzisa i-Sustanon-250 njenge-steroid kuya kubangela iziphumo ezimbi ezimbi kwi-estrogenic kunye ne-androgenic.
Enye yeempembelelo ze-estrogenic zeSustanon 250 yi-gynecomastia. I-Gynecomastia isandiso sesifuba ngenxa yokunyuka kwamahomoni e-estrogen .. Ukuze ugweme le mpembelelo, ungathanda ukusebenzisa isisterngen supplement okanye i-aromatase inhibitor njengeGynectrol ne-Arimidex.
Imiphumo ye-androgenic, i-acne kunye nokulahleka kweenwele kunokubonakala kwi-Sustanon-250 ukusetshenziswa. Nangona kunjalo, akukhuthazwa ukuba abafazi basebenzise iSustanon 250. Abasetyhini banokuhlupheka ngenxa ye-testosterone ephantsi, kodwa inokuphathwa ngamanye amayeza.
17.Yintoni umehluko phakathi kweT Testosterone Sustanon 250 Testosterone Enanthate?
Xa kuziwa ukuthelekisa i-Sustanon 250 kunye ne-Testosterone Enanthate, umlinganiselo oyintloko usele ubude be-ester.
I-Sustanon 250, kuba inhlanganisela enokude yendawo yeTestosterone, ithatha ixesha elithile ukuba "likhabe" kodwa inzuzo kule nxalenye ye-anabolic inokufezekiswa ngeentsholongwane ezingaphantsi. Ngakolunye uhlangothi, i-Testosterone Inanthate, iyadingeka ukuba ilawulwe rhoqo ngeveki ngenxa yee-esters ezimfutshane nangona iziphumo zayo zikhawuleza kuneSustanon.
I-testosterone enanthate, xa isetyenziselwa imijikelezo yee-10-12 iiveki, yinto efanelekileyo ye-steroid njengoko kulula kubadlali ukuba baqonde kwaye baphathe amanqanaba e-testosterone. Nangona, le nzuzo ingahle ilahleke xa ubude bomjikelezo yii-4-6 iiveki njengoko iziphumo ze-steroid ziza kuqala ukubonisa emva kweeyure ze-2-4. Ngenxa yee-esters ezixutywayo, i-Sustanon yinto enzima ye-steroid yokujongana nayo xa kufikelele ekulawuleni kakuhle kwezinga legazi.
Nangona kunjalo, i-Testosterone enanthate ikholelwa ukuba iyanyamezeleka ngaphezu kweSustanon xa ifika kwi-estrogenic side-effect management. Oku kubangelwa ukuba amanqanaba egazi le-testosterone athambe ukwakha ngokukhawuleza kunye nokusetyenziswa kwe-testosterone enanthate kwaye oku kuthetha ukuba iziphumo ezibi azibonanga kusasa. Ukhetho phakathi kweSustanon 250 kunye ne-Testosterone Enanthate kuphela kuxhomekeke kulindeleke kumjikelezo we-steroid kunye namava adlulileyo (ukuba kukho).
18.Bufaka i Testosterone Sustanon 250 Powder Raw
Kwimarike, kukho iintlobo ezahlukeneyo zokucoca kwe-Testosterone Sustanon i-250 powder, ngokuqhelekileyo isuka kwi-60% -99%, i-Testosterone Sustanon 250 powder ngokucocwa okuphezulu njenge-99% ngokuqhelekileyo kwiGrade yeBanga, ekhuselekileyo ukusebenzisa, kwicala elingaphantsi iziphumo, zinokuvelisa i-Testosterone iSustanon 250 ngaphezulu kweziyobisi. Nokuba ungaqwalasela izinto ezininzi ezifana nomlinganiselo wokudlula, indlela yokuthumela, nokuba ngaba umthengi unokwethenjelwa, yintoni inkonzo ... i-AAS iya kusombulula konke oku kuwe.AASraw Biochemical Technology Co.
ihlelwe ngokutsha yi-Shanghai esebenzisa i-Biochemical Engineering Laboratory kwi-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakanyisiwe kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroids ipowder eluhlaza, ukwakha umzimba ukulahleka, i-hormone yesondo, i-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, homebrew, ugl.Njenge-testosterone enanthate 90USD / 100g, uphawu oluphezulu lwe-Clen HCL, sibutramine, ect.
Yintoni i-nandrolone powder esetyenziselwa i-nandrolone inzuzo? I-Fasoracetam izibuyekezo zokuphononongwa, umlinganiselo, umphumo Yintoni i-methenolone enanthate powder?
I-Lorcaserin powder: Zonke izinto malunga nokulahleka kweziyobisi	I-Primobolan - i-steroid yokusika kakhulu